कोक खाएको १ घण्टाभित्र तपाइँको शरीरमा के-के हुन्छ ? - Nepalpati.com - News Portal from Nepal, Politics, Business, Science, Social, Sport, Ecomony, Entertainment, Movie, Nepali Model, Actor, Actress, Interview| Nepal Pati
कोक खाएको १ घण्टाभित्र तपाइँको शरीरमा के-के हुन्छ ?
काठमाडौं । सफ्ट ड्रिंक्ससँग जोडिएको एउटा समाचारले विश्वमा खलबली मच्याएको छ । ब्रिटेनका नीरज नाइकले आफ्नो एक ब्लगमा कोल्ड ड्रिंक्स खाएपछि शरीरको भित्र हुने प्रभावका बारेमा केही कुरा बाहिर ल्याएका छन् । त्यससँगै विश्वभरका मानिसहरूले उनका कुराप्रति उत्सुकता देखाएका छन् ।
उनले यस ब्लगमा कोकाकोला खाए कोडेली मेलका अनुसार नाइकले एक ग्राफिकका माध्यमबाट बताएका छन् कि कोल्ड ड्रिंक्सले शरीरको आवश्यक खनिज पदार्थ बाहिर ल्याउँछ र मानिस मानसिक र शारीरिक रुपमा बदलिन थाल्दछ ।
आउनुहोस् जानौं कोक खाएको १ घण्टाभित्र तपाइँको शरीरमा के-के हुन्छ ?
जब तपाई एउटा कोकाकोला खानुहुन्छ तब तपाईको शरीरमा १० चम्चा चिनी भित्र जान्छ । यो मात्रा २४ घण्टामा लिएको चिनीको मात्रा बराबर हुन्छ । अचानक यति मिठो खाइपछि तपाईलाई बान्ता पनि हुन सक्छ तर त्यसमा मिसीएको फास्टोरिक एसिडका कारण यसो हुँदैन ।
कोक आएको २० मिनेटपछि खाने मानिसको ब्लड सुगर एकदमै बढ्छ । जसका कारण शरीरको लिबरले शरीरमा प्रतिक्रिया गर्छ र मोटोपना बढ्न जान्छ ।
त्यसपछि तपाईको शरीरमा क्याफिनको मात्रा छिटोछिटो बढ्दै जान्छ । अर्कोतर्फ ब्लड प्रेसर पनि बढ्दै जान्छ । जसका कारण तपाईको लिबरले रगतमा अझ बढी चिनीका मात्रा पुर्याउँछ । जसको कारण मस्तिष्कमा रगत जान कम हुन्छ ।
खाएको १ घण्टापछि तीन प्रक्रिया हुन्छ :
१. फास्फोरिक एसिडले तपाईको शरीरको भित्रि भागमा क्याल्सियम, मेग्निसियम र जिंकलाई एकस्थानमा जम्मा पार्छ । जसका कारण मेटाबोलिज्म बढ्छ । चिनी र अन्य आर्टिफिसियल मिठासको बढ्दो मात्राका कारण मेटाबेल्जिक रेट थप बढ्छ । यसपछि मानिस पिसाब फेर्न जान बाध्य हुन्छन् । त्यसपछि पिसाबको माध्यमबाट र क्याल्सियम बाहिर निस्कन्छ ।
२. क्याफिनलाई तरल बनाउने गुणले असर देखाउन थाल्छ । अनि तपाईलाई पटकपटक पिसाब लाग्न थाल्छ । जसका कारण तपाईको शरीरबाट क्याल्सियम, मेग्निसियम र जिंक र सोडियम बाहिर जान्छ, जुन तपाईको हड्डीमा जानुपर्ने हो ।
३. जसरी यो प्रक्रिया हुन्छ । मिठोपनको असर बढ्दै जान्छ । अनि तपाई अल्छी बन्न थाल्नुहुन्छ । त्यसपछि पनि कोकमा भएको पानी युरिनद्वारा बाहिर निक्लदै गइरहन्छ ।